အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ကျွန်မနှင့် အချစ်ဦး
20 Responses to “ကျွန်မနှင့် အချစ်ဦး”
အချစ်ဆိုတာလည်း အသစ် အသစ် မွေးဖွားတတ်တဲ့ အရာကိုးနော်..
အမြဲတမ်းကြီးမမှန်ပါဘူး.. နှစ်တွေဘယ်လောက်ကြာကြာ.. ဘယ်သူနဲ့ပဲ ထပ်မံဆုံတွေ့ပါစေ... အချစ်ဦးအကြောင်းကို ပြန်တွေးလိုက်တိုင်း ပြုံးရယ်စရာတစ်ခုတော့ ဖြစ်မသွားပါဘူး... ဘ၀နဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် အရေးမကြီးဘူးလို့ဆိုနိုင်ပေမယ့် ပြုံးစရာအဖြစ်အပျက်အနေနဲ့တော့ ကျန်ရစ်မနေခဲ့ပါဘူး.. ဒါကြောင့် မြန်မာစကားပုံမှာ ငယ်ကချစ် အနှစ်တစ်ရာ မမေ့သာဆိုတာလည်း ရှိပါတယ်....
အောက်ဆုံး ကြက်စွပ်ပြုတ် ဆီကဆိုတော့မှ ဘာသာပြန်မှန်းသိတော့တယ်... မချောရဲ့ ခံစားချက်လေးတွေမှတ်လို့ ဖတ်လိုက်တာ... :P
တို့မချောတစ်ယောက် အချစ်ဦး အကြောင်းရင်ဖွင့်ပြီထင်နေထှား)း)
ရယ်ပြုံးစရာ အဖြစ်ပျက်တခု ခံစားမှုတခုလို့ နောက်တချိန်ဆိုကောင်းဆိုနိုင်ပေမယ့် ခံစားဝမ်းနည်း ငိုကြွေးခဲ့ရတာ ချစ်ခဲ့ရတာတွေ မျှော်လင့်ခဲ့ရတာတွေက ဘဝအမှတ်တရတွေပဲမဟုတ်လား
ရေးမပြီးခဲ့တဲ့ လက်စမသတ်ခဲ့ရတဲ့ ဒိုင်ယာရီစာမျက်နှာအဖြစ် တမြေ့မြေ့ လူတိုင်းရင်မှာတဆွေးဆွေး ရှိနေဦးမှာပါ မချောရေ....း)း)
မကြီချောရေ...စာလေးဖတ်သွားပါတယ်....အချစ်စစ်ဆိုတာနဲ့ကြုံပြီး အသည်းလည်းမကွဲခဲ့ရဘူးဆိုရင် ဘယ်လောက်ကံကောင်းလိမ့်မလဲနော်....ကွဲတော့လည်း
ဘ၀မှာတစ်ချို့ ကိစ္စတွေကအချိန်ကြာရင်မေ့သွားပြီး တစ်ချို့ ဆိုကြုံစဉ်တုန်းကသဲထိတ်ရင်ထိတ်စိုးရိမ်ရတာတွေလည်းနောင်ကျတော့ရယ်မောစရာတွေဖြစ်ရပြန်တာ ဆုိုတော့အချိန်ကအခရာလို့ ထင်မိပါတယ်။
အင်း...အသဲကွဲပြီး နာကျင်ခံစားနေရတဲ့ သူတွေအတွက် အားဖြည့်စာပါပဲ။ အချိန်တခုကို ကျော်ဖြတ်နိင်တဲ့အခါ အရာရာက ပြန်တွေးတိုင်း ပြုံးစရာ အဖြစ်လောက်သာ ကျန်တော့တယ်။
လောကဓံတရားကို ကြံ့ကြံ့ခံ ရင်ဆိုင်နိုင်စေဘို့
ပညာပေးလေးဆိုလည်း မမှာဘူးပေါ့ ချောရေ။
ချောရဲ့ အကြောင်းလားလို့ နောက်မှဘာသာပြန်မှန်း ခန့်မှန်းမိတော့တယ်း)
အသည်းကွဲနေတဲ့လူအတွက်တော့ တကယ်ကို သက်သာရာ ရစေတဲ့မဲ့ပို့စ်ကောင်းလေးပါပဲနော်...
မြန်မာမိန်းခလေးအများစုရဲ့ စိတ်အတွေးမှာလည်း အမေပြောခဲ့တာ မှန်မှာပါလို့ လေးစားအားကိုးစိတ် ရှိကြမှာပါ။ ခုလို အချစ်ဦးကြောင့် အသည်းကွဲရပြီ ဆိုရင်လေ...။း)
မချော အကြောင်းလား....လို့ :P
ဒီအချိန်မှာ အဓိပ္ပာယ်မဲ့တယ်လို့ခံစားမိပေမယ့် ကြာလာရင် ပြုံးစရာလေး ဖြစ်နေမှာပါ..
အင်း အချစ်ဦး ကို မေ. နိုင် ဖို. ဆို တာ မ လွယ် ပါ ဘူး ကွာ !
May Thu said
In my opinion,this is the nature of the human being. Right???
ပထမဆုံး အတွေ့ အကြုံ မှာ စိတ်ဓါတ်ကျပြီး မလုပ်သင့်တာတွေမလုပ်မိဖို့ အရေးကြီးတယ် ဥပမာ အဆိပ်သောက်တာမျိုးပေါ့။
ဟုတ်ပါတယ် တကယ်တော့အချစ်ဆိုတာ ဘာမှမဟုတ်သလိုပါ